လူ​တွေအယူကြီးလက်​ခံထားကြတဲ့ ​သေခြင်းနိမိတ်​ဆိုး​တွေအ​ကြောင်း - CantWait2Say
ကမ္ဘာ​ပေါ်မှာ လူသန်း​ပေါ်င်းများစွာ ရှိတဲ့ထဲ အယူအဆ​တွေ ယဉ်​​ကျေးမှု​တွေ ဓ​လေ့စရိုက်​လက္ခဏာ​တွေ ပုံစံတူ ပုံစံကွဲ မျိုးစုံရှိပါတယ်​။ ဘဝနဲ့ပတ်​သက်​တဲ့ အယုံအကြည်​​တွေ၊ အယူသီးမှု​တွေ၊ အပြင်​ ​သေခြင်းနဲ့ ​သေခြင်းအတွက်​ နိမိတ်​ဆိုးအဖြစ်​ လူမှုလက်​ခံမှု ပုံစံမျိုးစုံရှိပါတယ်​။ ဒီလိုအတိတ်​နိမိတ်​ဆိုး​တွေကို ​ဖော်​ပြ​ပေးထားပါတယ်​။
လ်ိပ်​ပြာ​လေး​တွေဟာ နူးနူးညံ့ညံ့ နဲ့ လူ​တွေအကြိုက်​ သိပ်​လှပါတယ်​။ တခုရှိတာက လိပ်​ပြာအမည်း​တွေပါ။ အယူရှိကြတာက​တော့ လိပ်​ပြာအမည်း​တွေဆိုတာ မရဏန်ိမိတ်​လို့ဆိုပါတယ်​။ အိမ်​မှာ တ​ကောင်​လောက်​​တွေ့ရပြီဆို အိမ်​သားတ​ယောက်​ကို ဆုံးရှူံးရမယ့်​ လက္ခဏာပါတဲ့။ (ချင့်​ယုံကြပါ) ​နေရာ​ဒေသယဉ်​​ကျေးမှုအရလည်း လက်​ခံပုံချင်း ကွာပါတယ်​။ ​တောင်​ပိုင်း Texas မှာဆို အိမ်​ရဲ့​ထောင့်​တိုင်းမှာ ​တွေ့မိမှပဲ ဒီလိုနိမိတ်​လို့ ယုံပါတယ်​။ Hawaii မှာဆို တမလွန်​​ရောက်​သွားပြီးတဲ့ ချစ်​မြတ်နိုး​ရသူတ​ယောက်​က အိမ်ကိုပြန်လာ၊ ကိုယ်​ထင်​ပြန်​လာပြတာဖြစ်​ပြီး ​နောက်​ဆုံး လာနှုတ်​ဆက်​တဲ့သ​ဘောပါတဲ့။
“Doppelgänger” စကားက ဂျာမန်​စကားဖြစ်​ပြီး ​ကျောချမ်းချင်​စရာ​ကောင်းတဲ့ ကိုယ့်​နဲ့ပုံတူ မ​ကောင်းဆိုးဝါးပါတဲ့။ ဆိုလိုရင်းက​တော့ “Doppelgänger” ကို ကိုယ့်​နား​တွေ့ပြီဆိုရင်​ မရဏနိမိတ်​ပါတဲ့။ သမ္မတလင်ကွန်းရဲ့ အဖြစ်​လည်းရှိပါတယ်​။ သူမှန်ကြည့်တုန်း သူတ​ယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲ သူနဲ့ပုံတူ၂​ယောက်ဖြစ်​​နေတာတဲ့။ သူမိန်းမကိုပြန်​​ပြောပြ​တော့ မိန်းမက လင်​ကွန်း သမ္မတအဖြစ်​ ဒုတိယအကြိမ်​ တာဝန်​ထမ်းရ​တော့မယ့်​ လက္ခဏာ လို့ ဆို​ခဲ့​ပေမယ့်​ တကယ်​တမ်းမှာ လင်​ကွန်းဟာ ပထမသက်​တမ်းမကုန်​ဆုံးမှာတင်​ ကွယ်​လွန်​ခဲ့ပါတယ်​။
အိမ်​​ရှေ့တံခါးကို လူတ​ယောက်​သုံးကြိမ်​တိတိ လာ​ခေါက်​ရင်​ ဒီအိမ်​မှာရှိတဲ့ လူတ​ယောက်​ ​သေဆုံးဖို့ အ​ကြောင်းဖန်​ပါပြီတဲ့။ အိုင်းရှစ်​လူမျိုး​တွေ၊ အ​မေရိကန်​​တွေ၊ ဂျူး​တွေ နဲ့ အိန္ဒိယလူမျိုး​တွေ ဒီအယူကို လက်​ခံကြပါတယ်​။
ကိုယ်မက်တဲ့​​​အိပ်​မက်​​တွေဆိုတာ ကိုယ်ရဲ့လက်​ရှိစိတ်​အ​ခြေအ​နေကို ​ပြန်​​ဖော်​ပြ​​ပေး​နေတာလို့ ဆိုကြတယ်​မဟုတ်​လား။ တချို့အိပ်​မက်​​တွေထဲ လကို အ​ရေအတွက်​ အများကြီး မြင်​​တွေ့ရပြီဆို ​မရဏနိမိတ်​လို့ ဆိုကြပါတယ်​။ အိပ်​မက်​ထဲမှာ ​ရွှံကန်​လို ​ညစ်​ညစ်ပတ်​​ပတ်​​ရေကန်​ထဲ ဖြတ်​​လျှောက်​​နေရတယ်​ မက်​ရင်​လည်း ဒီသ​ဘောပါပဲ။ တချို့​တွေကဆို အိပ်​မက်​ထဲ သွားကျွတ်​တာ​တောင်​ ​သေခြင်း​သ​ဘောလို့ လက်​ခံကြပါတယ်​။ ​နောက်​တခုက ကိုယ့်​အိပ်​မက်​ထဲ တခြားတ​ယောက်​အဝတ်ဝတ်​​နေတုန်း ကူမဝတ်​​ပေးသင့်​ပါဘူးတဲ့။
တနှစ်​​အောက်​ က​လေးငယ်​​တွေ မှန်​​ကြေးမုံကို ကြည့်​မိရင်​ ငယ်​ငယ်​ရွယ်​ရွယ်​နဲ့ ​သေဆုံးကြရမယ်​ လို့ အယူရှိကြပါတယ်​။ အိမ်​မှာ မှန်​ကျကွဲရင်​ ခုနစ်​နှစ်​ကာလအထိ အ​မှောင်​ကံဆိုးတိုက်​ထဲ ပိတ်​မိ​နေမယ်​လို့ လက်​ခံကြသလို အိမ်​မှာ ​ကြေးမုံမှန်​ အက်​ကွဲ​နေရင်​လည်း မရဏတရားကို ​ခေါ်​ဆောင်​လာတတ်​လို့ ယူဆတတ်ကြပါတယ်​။
ဇီးကွက်​​တွေဟာ စိတ်​ကို​လေး​မှိုင်းေ​စတဲ့ အတိတ်​နမိတ်​လို့ ယူဆကြပြီး ​သေခြင်းလက္ခဏာလို့ လူ​တွေယုံကြည်​ကြပါတယ်​။ ကိုယ့်​​အိမ်​​ခေါင်​မိုးဖြစ်​ဖြစ်​ အိမ်​နီးချင်း​ခေါင်​မိုးမှာဖြစ်​ဖြစ်​ ဇီးကွက်​လာ​အော်​​နေမယ်​ဆိုရင်​ တစုံတ​ယောက်​မကြာခင်​ ​သေဆုံး​​တော့မယ့်​ အရိပ်​လို့ ဆိုပါတယ်​။ ဒီအယူအဆ​ကို စပြီးလက်​ခံလာကြတာက ​ရောမသား​တွေဖြစ်​ပြီး ဧကရာဇ်​အန်​တိုးနီးယပ်​စ်​သေဆုံးချိန်​မှာ သူ့အိပ်​ခန်း​ဆောင်​​ဝအ​ရှေ့မှာ ဇီးကွက်​တ​ကောင်​ထိုင်​​နေခဲ့တာပါ။
တချို့​ခွေး​တွေက ကြုံလာ​တော့မယ့်​ အန္တရာယ်​ကို အလိုလိုသိနိုင်​စွမ်းရှိပါတယ်​။ အထူးသဖြင့်​ သူ့သခင်​နဲ့ပတ်​သက်​လာမယ့်​ ကိစ္စ​တွေမျိုးမှာ​ပေါ့။ ​ခွေးက ​ဟောင်​​နေပြီ။ ဒါ​ပေမယ့်​ ​ခေါင်းကို​အောက်​ငုံ့စိုက်​ပြီး ​ဟောင်​​နေရင်​ မကြာခင်​လာ​တော့မယ့်​ ​သေခြင်းတရားကို ရည်​ညွှန်းပါတယ်​။ ​ခေါင်းမပါတဲ့ ​ခွေးမည်းကြီးတ​ကောင်​ ကိူယ့်​​ရှေ့မှာမြင်​ရသလို ခံစားရပြီဆိုရင်​ သိပ်​မကြာ​တော့ခင်​ ဒီ​လောကကို စွန့်​ခွာရ​တော့မယ့်​သ​ဘောလို့ ဆိုကြပါတယ်​။
ကမ်ဘာ​ပျေါမှာ လူသနျး​ပျေါငျးမြားစှာ ရှိတဲ့ထဲ အယူအဆ​တှေ ယဉျ​​ကြေးမှု​တှေ ဓ​လစေ့ရိုကျ​လက်ခဏာ​တှေ ပုံစံတူ ပုံစံကှဲ မြိုးစုံရှိပါတယျ​။ ဘဝနဲ့ပတျ​သကျ​တဲ့ အယုံအကွညျ​​တှေ၊ အယူသီးမှု​တှေ၊ အပွငျ​ ​သခွေငျးနဲ့ ​သခွေငျးအတှကျ​ နိမိတျ​ဆိုးအဖွဈ​ လူမှုလကျ​ခံမှု ပုံစံမြိုးစုံရှိပါတယျ​။ ဒီလိုအတိတျ​နိမိတျ​ဆိုး​တှကေို ​ဖျော​ပွ​ပေးထားပါတယျ​။
လျိပျ​ပွာ​လေး​တှဟော နူးနူးညံ့ညံ့ နဲ့ လူ​တှအေကွိုကျ​ သိပျ​လှပါတယျ​။ တခုရှိတာက လိပျ​ပွာအမညျး​တှပေါ။ အယူရှိကွတာက​တော့ လိပျ​ပွာအမညျး​တှဆေိုတာ မရဏနျိမိတျ​လို့ဆိုပါတယျ​။ အိမျ​မှာ တ​ကောငျ​လောကျ​​တှရေ့ပွီဆို အိမျ​သားတ​ယောကျ​ကို ဆုံးရှူံးရမယျ့​ လက်ခဏာပါတဲ့။ (ခငျြ့​ယုံကွပါ) ​နရော​ဒသေယဉျ​​ကြေးမှုအရလညျး လကျ​ခံပုံခငျြး ကှာပါတယျ​။ ​တောငျ​ပိုငျး Texas မှာဆို အိမျ​ရဲ့​ထောငျ့​တိုငျးမှာ ​တှမေိ့မှပဲ ဒီလိုနိမိတျ​လို့ ယုံပါတယျ​။ Hawaii မှာဆို တမလှနျ​​ရောကျ​သှားပွီးတဲ့ ခဈြ​မွတျနိုး​ရသူတ​ယောကျ​က အိမျကိုပွနျလာ၊ ကိုယျ​ထငျ​ပွနျ​လာပွတာဖွဈ​ပွီး ​နောကျ​ဆုံး လာနှုတျ​ဆကျ​တဲ့သ​ဘောပါတဲ့။
“Doppelgänger” စကားက ဂြာမနျ​စကားဖွဈ​ပွီး ​ကြောခမျြးခငျြ​စရာ​ကောငျးတဲ့ ကိုယျ့​နဲ့ပုံတူ မ​ကောငျးဆိုးဝါးပါတဲ့။ ဆိုလိုရငျးက​တော့ “Doppelgänger” ကို ကိုယျ့​နား​တှပွေီ့ဆိုရငျ​ မရဏနိမိတျ​ပါတဲ့။ သမ်မတလငျကှနျးရဲ့ အဖွဈ​လညျးရှိပါတယျ​။ သူမှနျကွညျ့တုနျး သူတ​ယောကျတညျးမဟုတျဘဲ သူနဲ့ပုံတူ၂​ယောကျဖွဈ​​နတောတဲ့။ သူမိနျးမကိုပွနျ​​ပွောပွ​တော့ မိနျးမက လငျ​ကှနျး သမ်မတအဖွဈ​ ဒုတိယအကွိမျ​ တာဝနျ​ထမျးရ​တော့မယျ့​ လက်ခဏာ လို့ ဆို​ခဲ့​ပမေယျ့​ တကယျ​တမျးမှာ လငျ​ကှနျးဟာ ပထမသကျ​တမျးမကုနျ​ဆုံးမှာတငျ​ ကှယျ​လှနျ​ခဲ့ပါတယျ​။
အိမျ​​ရှတေံ့ခါးကို လူတ​ယောကျ​သုံးကွိမျ​တိတိ လာ​ခေါကျ​ရငျ​ ဒီအိမျ​မှာရှိတဲ့ လူတ​ယောကျ​ ​သဆေုံးဖို့ အ​ကွောငျးဖနျ​ပါပွီတဲ့။ အိုငျးရှဈ​လူမြိုး​တှေ၊ အ​မရေိကနျ​​တှေ၊ ဂြူး​တှေ နဲ့ အိန်ဒိယလူမြိုး​တှေ ဒီအယူကို လကျ​ခံကွပါတယျ​။
ကိုယျမကျတဲ့​​​အိပျ​မကျ​​တှဆေိုတာ ကိုယျရဲ့လကျ​ရှိစိတျ​အ​ခွအေ​နကေို ​ပွနျ​​ဖျော​ပွ​​ပေး​နတောလို့ ဆိုကွတယျ​မဟုတျ​လား။ တခြို့အိပျ​မကျ​​တှထေဲ လကို အ​ရအေတှကျ​ အမြားကွီး မွငျ​​တှရေ့ပွီဆို ​မရဏနိမိတျ​လို့ ဆိုကွပါတယျ​။ အိပျ​မကျ​ထဲမှာ ​ရှံကနျ​လို ​ညဈ​ညဈပတျ​​ပတျ​​ရကေနျ​ထဲ ဖွတျ​​လြှောကျ​​နရေတယျ​ မကျ​ရငျ​လညျး ဒီသ​ဘောပါပဲ။ တခြို့​တှကေဆို အိပျ​မကျ​ထဲ သှားကြှတျ​တာ​တောငျ​ ​သခွေငျး​သ​ဘောလို့ လကျ​ခံကွပါတယျ​။ ​နောကျ​တခုက ကိုယျ့​အိပျ​မကျ​ထဲ တခွားတ​ယောကျ​အဝတျဝတျ​​နတေုနျး ကူမဝတျ​​ပေးသငျ့​ပါဘူးတဲ့။
တနှဈ​​အောကျ​ က​လေးငယျ​​တှေ မှနျ​​ကွေးမုံကို ကွညျ့​မိရငျ​ ငယျ​ငယျ​ရှယျ​ရှယျ​နဲ့ ​သဆေုံးကွရမယျ​ လို့ အယူရှိကွပါတယျ​။ အိမျ​မှာ မှနျ​ကကြှဲရငျ​ ခုနဈ​နှဈ​ကာလအထိ အ​မှောငျ​ကံဆိုးတိုကျ​ထဲ ပိတျ​မိ​နမေယျ​လို့ လကျ​ခံကွသလို အိမျ​မှာ ​ကွေးမုံမှနျ​ အကျ​ကှဲ​နရေငျ​လညျး မရဏတရားကို ​ချေါ​ဆောငျ​လာတတျ​လို့ ယူဆတတျကွပါတယျ​။
ဇီးကှကျ​​တှဟော စိတျ​ကို​လေး​မှိုငျးေ​စတဲ့ အတိတျ​နမိတျ​လို့ ယူဆကွပွီး ​သခွေငျးလက်ခဏာလို့ လူ​တှယေုံကွညျ​ကွပါတယျ​။ ကိုယျ့​​အိမျ​​ခေါငျ​မိုးဖွဈ​ဖွဈ​ အိမျ​နီးခငျြး​ခေါငျ​မိုးမှာဖွဈ​ဖွဈ​ ဇီးကှကျ​လာ​အျော​​နမေယျ​ဆိုရငျ​ တစုံတ​ယောကျ​မကွာခငျ​ ​သဆေုံး​​တော့မယျ့​ အရိပျ​လို့ ဆိုပါတယျ​။ ဒီအယူအဆ​ကို စပွီးလကျ​ခံလာကွတာက ​ရောမသား​တှဖွေဈ​ပွီး ဧကရာဇျ​အနျ​တိုးနီးယပျ​ဈ​သဆေုံးခြိနျ​မှာ သူ့အိပျ​ခနျး​ဆောငျ​​ဝအ​ရှမှေ့ာ ဇီးကှကျ​တ​ကောငျ​ထိုငျ​​နခေဲ့တာပါ။
တခြို့​ခှေး​တှကေ ကွုံလာ​တော့မယျ့​ အန်တရာယျ​ကို အလိုလိုသိနိုငျ​စှမျးရှိပါတယျ​။ အထူးသဖွငျ့​ သူ့သခငျ​နဲ့ပတျ​သကျ​လာမယျ့​ ကိစ်စ​တှမြေိုးမှာ​ပေါ့။ ​ခှေးက ​ဟောငျ​​နပွေီ။ ဒါ​ပမေယျ့​ ​ခေါငျးကို​အောကျ​ငုံ့စိုကျ​ပွီး ​ဟောငျ​​နရေငျ​ မကွာခငျ​လာ​တော့မယျ့​ ​သခွေငျးတရားကို ရညျ​ညှနျးပါတယျ​။ ​ခေါငျးမပါတဲ့ ​ခှေးမညျးကွီးတ​ကောငျ​ ကိူယျ့​​ရှမှေ့ာမွငျ​ရသလို ခံစားရပွီဆိုရငျ​ သိပျ​မကွာ​တော့ခငျ​ ဒီ​လောကကို စှနျ့​ခှာရ​တော့မယျ့​သ​ဘောလို့ ဆိုကွပါတယျ​။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာကိုကြည့်ပြီး သူ့ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကိုခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ခြေချောင်းအသွင်အပြင်လက္ခဏာ အမျိုးအစား ၅ မျိုးရှိပါတယ်။ ဥပမာ နှာခေါင်းကြည့်ပြီး ခွဲနိုင်သလို ၊ လက်တွေကို ကြည့်ပြီးလည်း ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ အခု တစ်ခေါက်ကတော့ ခြေချောင်ေးလးတွေကို ကြည့်ပြီး ခွဲခြားတဲ့နည်းလမ်းပါ။ ၁. Egyptain ၂. Roman ၃. Greek …
ဖောက်ပြန်တဲ့ ဇနီးသည်ကို အဝတ်ဗလာနဲ့ လမ်းလျှောက်ခိုင်းသူ ယောက်ျားတို့ရဲ့ YouTube က ဗီဒီယိုဖိုင်
ဖောက်ပြန်တဲ့ ဇနီးသည်ကို အဝတ်ဗလာနဲ့ လမ်းလျှောက်ခိုင်းသူ ယောက်ျားတို့ရဲ့ YouTube က ဗီဒီယိုဖိုင် နယူးယောက်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တခုဖြစ်ပါတယ်။နယူးယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဖောက်ပြန်တဲ့ ဇနီးကို ယောက်ျားမိပြီး ဆွဲခေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ဇနီးက ရိုးရိုးဖောက်ပြန်တာမဟုတ်ပါဘူး။သူစိမ်းယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ မာဆတ်လုပ်နေရင်းကနေ ယောက်ျားဖြစ်သူက ဖမ်းမိတာဖြစ်ပါတယ်။ မဖွယ်မရာ မြင်ကွင်းတချို့ကို အလုပ်က ပြန်လာတဲ့ ယောက်ျားက …
Photoshop အကူအညီမလိုပဲ အလိုလို မိုက်နေပြီးသားပုံများ
ကမ္ဘာကြီးဟာ သိပ်ပြီးထူးခြားလှပဆန်းကြယ်တဲ့အပြင် လျှပ်တပြက်အခိုက်အတန့်အတွင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုံရိပ်တွေဟာလည်း မှင်သက်အံ့သြစေတာအမှန်ပါ။ဆိုတော့ ဒီတစ်ခါမှာတော့ photoshopအကူအညီမလိုပဲ မိုက်နေတဲ့ပုံရိပ်တွေ၊ဆန်းကြယ်တဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့ ကမ္ဘာကြီးဆီအလည်သွားရအောင်။ ။ 1.အခြားကမ္ဘာတစ်ခုရောက်သွားသလိုကိုခံစားရစေမယ့် ကောင်းကင်ရဲ့ရောင်ပြန်ဟပ်မှု 2.အသေးစားဖရဲသီး 3.ကဗျာဆန်ဆန်မိုးကြိုး 4.နေ့စဉ်တီးခတ်နေတဲ့ ဂီတာအတွင်းအနေအထား 5.Altaiမှာနှင်းကျပုံ လှချက်ပဲ 6.မြို့ကြီးပြကြီးတွေကိုအမိုက်ဆုံးဖြစ်စေတဲ့ ရိုက်ချက်အနေအထား 7.The Artist’s Academy 8.တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ လူအုပ်ကိုအနုပညာဆန်ဆန်ပုံဖော်ထားပုံ 9.လအောက်မှာပျံသန်းခြင်း …